First ... 23 31 32 33 34 Last
10-07-2012 01:04 PM #321
ပြင်သစ်ကိုရောက်ရင် ရောက်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လုဗ် (Louvre Museum) ကိုတော့ ညဖက်အချိန်ကြာကြာဖွင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သင်တန်းပြီးပြီးချင်း သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြတိုက်ဟာ အင်္ဂါနေ့ပိတ်ပြီး ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ မနက် ၉နာရီက ညနေ ၆ နာရီအထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သေကြာ နှစ်နေ့မှာတော့ ည ၉နာရီခွဲအထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တော့ ညနေ ၇ နာရီလောက်ပေါ့။ လုဗ်ပြတိုက်နဲ့အနီးဆုံး မက်ထရိုဘူတာတွေကတော့ Louvre Rivoli နဲ့ Palais Royal Musée du Louvre တို့ပါ။ Rivoli ဘူတာက ထွက်ရင် ပြတိုက်ကို ဒီလို အပြင်က မြင်ရပါတယ်။
နောက် ဘူတာတစ်ခုက ဆိုရင်တော့ ပြတိုက်အောက်ကို တန်းရောက်သွားအောင် လမ်းဖေါက်ထားပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာတော့ ဆိုင်တွေပေါ့။ Apple Store တောင်ရှိသေး။ အထဲကို ဝင်လာတော့ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ စက်တွေရယ် Information counterရယ် ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ The Da Vinci Code ထဲက Tom Hank နောက်ဆုံးလာကြည့်တဲ့ အောက်စိုက်နေတဲ့ မှန်ပိရမစ်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ အပေါ်တက်တဲ့ လှေခါး။ တကယ်လို့ Rivoli ဘူတာကလာရင် အပေါ်က မှန်ပိရမစ်ထဲက ဝင်လာရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အတွင်းလမ်းက ဝင်ခဲ့တာဆိုတော့ အပေါ်ကို ပြန်တက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာပေါ့။
လက်မှတ်ကတော့ တစ်ရက်စာ နှစ်ရက်စာကစလို့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ သေသေချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ပါတ်တောင် လောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး တွေ့တဲ့ အပေါက်က ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေက အစီအရီ . . .
ဒီတစ်ခုမှာတော့ တကယ့်လူ အမူအရာ လုပ်ထားသလားထင်ရလောက်အောင် လက်ရာမြောက်ပါတယ်။ ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားထဲက လူတွေသတ် ဖယောင်းလူးပြီး ဖယောင်းပြတိုင် လုပ်ထားတာကို သွားသတိရမိတယ်။
ဒီပြတိုက်မှယ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေ ရှိတာကြောင့် အောက်ကလို ဂျပန် ရှေးဟောင်းအရုပ်တွေလည်း တွေ့ရတယ်။
ပတ်ရင်းနဲ့ အီဂျစ်တွေ ရှိရာ ရောက်သွားပြီးတော့မှ မိုနာလီဇာကို သွားသတိရတာမို့ ပြတိုက်စောင့် ကို မိုနာလီဇာ ရှိရာ မေးကြည့်ရပါတယ်။ သူက လမ်းညွှန်တာကြောင့် အမြန်ပြန်ထွက်ပြီး နောက် အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်းချီတွေ ထားရာ အခန်းကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဝင်မှာတွေရတဲ့ ရုပ်တုနဲ့ မျက်နှာကျက်က ပန်းချီကားတွေ . . .
ဒီပုံကတော့ အီတာလီယံပန်းချီဆရာ Filippo Lippi ၁၄၃၈ မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Barbadori_Altarpiece ပါ။ အဲဒီအကြောင်း သိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ
လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ပြင်သစ်လို ရေးထားတာမို့ အနားမှာ ရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာရွက်ကိုရှာ ရှာပြီး ဖတ်ရတယ်။ သိပ်မနိပ်ပါဘူး . . .
000, 2323, abya, Ares, badinf, BainnowSAYAR, BH, Botazan, fridayborn, happyvalley, k-pooh, Kaung Lay Luck, kokokhantchaw, LoveSuju, mgmgthan, mokenlay, mrlynn, Nsaboy, nyanmoe, orjawlan, silvia, THARGYII, THIHA, wasabi, weithet, zepeian
10-21-2012 04:41 AM #322
ပန်းချီပုံတွေ ဘေးမှာ ရေးထားတဲ့စာတွေက များသောအားဖြင့် ပြင်သစ်လိုပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာရွက်ကိုတော့ အနားမှာ ရှိတဲ့ အကန့်လေးတွေထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ အခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေလည်းပါတာပေါ့။ တကယ်လို့ အော်ဒီယိုဂိုက်နဲ့သွားရင်တော့ ရောက်တဲ့နေရာက ပန်းချီကားအကြောင်းတစ်ခါတည်း ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အမိုးတွေ ပေါ်မှာ မျက်နှာကျက်က ပန်းချီပုံတွေရော လမ်းဘေးဝဲယာက ပန်းချီတွေ ပါခံစားရင်း မိုနာလီဇာရှိရာ တရွေ့ရွေ့ လှမ်းခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံကတော့ ၁၄ ရာစု အလယ်ပိုင်းလောက်က ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အီတလီပန်းချီဆရာကြီး Banaba da Modena ရဲ့ La Vierge et L'Enfant, c. 1370-1375 ပန်းချီကားပါ။
၁၄ရာစုလောက်က ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ Simone Dei Crocifissi ရဲ့ Simone de Fillppo ပန်းချီကားပါ။
အီတလီ ပန်းချီဆရာ Liberale da Verona(1441–1526) ရဲ့ ပန်းချီတစ်ချပ်
Andrea Mantegna ( c. 1431 – September 13, 1506) ရဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်
မိုနာလီဇာကို အားပေးကြသူတွေ။ ဒီပြတိုက်မှာ ဒီနေရာကတော့ မရောက်မဖြစ်နေရာတစ်ခုပေါ့။ လူတွေကတော့ အမြဲတိုးခွေ့ကြည့်နေကြတာပဲ။
ပြတိုက်ရဲ့အလယ်လမ်းတစ်လျှောက်မြင်ကွင်း . .
000, 2323, abya, Ares, BainnowSAYAR, Botazan, happyvalley, honelay86, k-pooh, Kaung Lay Luck, LoveSuju, mgmgthan, mokenlay, mrlynn, nyanmoe, orjawlan, peace777, SakanaKun, THARGYII, THIHA, wasabi, zepeian
10-27-2012 09:45 AM #323
မိုနာလီဇာရဲ့အခန်းကနေထွက်ပြီး နောက်တစ်နေရာရောက်သွားတော့လည်း ပန်းချီကားတွေပါပဲ။ ပန်းချီဆရာတွေပြောင်းသွားသလို လက်ရာတွေကလည်းမတူ။ ပေးတဲ့ ခံစားမှုလည်းမတူတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တွေ့သမျှ ကြည့်ရှုခံစား ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
Swiss ပန်းချီဆရာLeopold-Louis Robert (1794-1835)- ရဲ့ L'Arrivee des moisonneurs dans les marais Pontins (1830)
နာမည်ဖတ်မရတော့လို့ ဘယ်သူ့လက်ရာမှန်းမသိတဲ့ ပန်းချီကားတွေ . .
ခန်းမထဲကနေ အပြင်ကမ္ဘာကို လှမ်းကြည့်တော့
ဒီပန်းချီကားကတော့ အီတလီ ပန်းချီဆရာ Paolo Caliari (1528 -1588 ) ရဲ့ Les Noces de Cana / The Wedding at Cana ဆိုတဲ့ ကားပါ။ မိုနာလီဇာနဲ့ တည့်တည့်မှာချိတ်ထားတဲ့ ခန်းလုံးပြည့်လုနီးပါး ကားကြီးပေါ့။ အနီးကပ်ကြည့်ကြည့် အဝေးက ကြည့်ကြည့် အနုစိတ်စုတ်ချက်တွေနဲ့ ချယ်မှုန်းထားတာပါ။ သူ့အကြောင်းအရာကတော့ ဒီလို -
" The Marriage at Cana or Wedding at Cana is an event reported by the Gospel of John but not by any of the Synoptic Gospels. John reports that Jesus was attendingawedding in Cana with his disciples for the Jewish rite of purification. When the hosts ran out of wine, Jesus' mother (unnamed in John's Gospel) told Jesus, "They have no more wine." Jesus replied, "Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come." Jesus' mother said to the servants, "Do whatever he tells you" (John 2:3-5). Jesus ordered the servants to fill the empty containers with water (see Jars of Cana). When they had done so, Jesus told them to draw out some of it and take it to the chief waiter. After tasting the water that had become wine and not knowing what Jesus had done, he told the bridegroom that he had departed from the custom of serving the best wine first by serving it last (John 2:6-10). This was the first miracle of Jesus and it was performed to reveal his glory, and his disciples put their faith in him (John 2:11). "
ဒီတစ်ပုံကတော့ ပန်းချီဆရာရဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်းအမြင်ကို ဖေါ်ကျူးထားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီရဲ့ ကားလို့ဆိုပါတယ်။ အမည်မသိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံတူပေါ့။ ကားနာမည်က " Ecole De Leonard De Vinci - Portrait de femme, dit La Belle Ferroniere "
ဒီပုံကတော့ နောက်ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာပါ။
အတွင်းကြည့်လို့ ဟုန်သွားတော့ အပြင်ဖက်ကို ငေးရတာပေါ့။
ဲပြီးတော့ နောက်တစ်ခန်း . . .
000, abya, ahteekyan, Ares, Botazan, csmatti, fridayborn, happyvalley, k-pooh, Kaung Lay Luck, LoveSuju, mgmgthan, mokenlay, mrlynn, nyanmoe, orjawlan, silvia, THARGYII, wasabi, yokesoe, zepeian
11-13-2012 02:45 PM #324
ကျွန်တော်ဆက်ပြီး ကြည့်သွားဖြစ်တဲ့ ပန်းချီတွေကို ဆက်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ နပိုလီယန်ရဲ့ ပန်းချီတော် Jacques-Louis David ( ၁၇၄၈-၁၈၂၅ ) ရဲ့ The Coronation of Napoleon ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားပါ။ ၁၈၀၇ ခုနှစ်မှာ ရေးဆွဲပြီးခဲ့တယ်တဲ့။ ၁၀မီတာအကျယ်၊ ၆ မီတာအမြင့်မို့ ခန်းလုံးပြည့် လို့ပြောရမယ့် ဆိုဒ်ပေါ့။ အနီးကပ်ကြည့်ကြည့် အဝေးကကြည့်ကြည့် အနုစိတ်စုတ်ချက်တွေက အခမ်းအနားရဲ့ ခန်းနားပုံကို ဖော်ကျူးနေပါတယ်။ အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်း နပိုလီယန်ကို ကြည့်နေပုံနဲ့ ထင်ရှားစေလိုသူကို ပိုမို ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်တိုးရစ်တစ်အုပ်ကို ဂိုက်တစ်ယောက်က ရှင်းပြနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ တော်တော်များများက ချထားတဲ့ ခုံတွေမှာ အေးအေးလူလူထိုင်ပြီး ရှင်းပြတာကို နားထောင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကြည့်စရာ ကျန်သေးတာကြောင့် နောက်တစ်ဖက်ခြမ်းကူးပြီး အလှနတ်သမီးဆီ အရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကနွဲ့ကလျနဲ့ ကြိုနေတာပေါ့။
abya, Ares, BainnowSAYAR, Botazan, csmatti, happyvalley, k-pooh, Kaung Lay Luck, LoveSuju, mgmgthan, MNO.BN, mrlynn, nyanmoe, THARGYII, wasabi, zepeian
12-02-2012 07:19 AM #325
ကျွန်တော်က ရုပ်တုတွေဖက်ရောက်သွားတော့ ဗီးနပ်စ် ရုပ်တုဆီအရင် သွားတာပေါ့နော်။ Venus de Milo လို့လူသိများတဲ့ ဗီးနပ်စ်ရုပ်တုဟာ ဘီစီ ၁၃၀ နဲ့ ၁၀၀ အတွင်းလက်ရာလို့ ပြောကြပါတယ်။ Alexandros of Antioch ရဲ့လက်ရာလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အောက်က ရုပ်တုတွေကတော့ ကျောက်ဆစ်ဆရာ Praxiteles ရဲ့ လက်ရာတွေပါ ပါတယ်။ အခြားရုပ်တုတွေကလည်း တကယ့်ကို လက်ရာမြောက်လှပါတယ်။
ဒီအောက်ကပုံကတော့ La pallas de velletri တဲ့ အေသင်ခေတ်က လက်ရာလို့ဆိုပါတယ်။
000, abya, Ares, BainnowSAYAR, Botazan, fridayborn, happyvalley, k-pooh, laramt, LoveSuju, mgmgthan, MNO.BN, Mood, mrlynn, nyanmoe, sunny007, THARGYII, wasabi, yokesoe, zepeian
12-08-2012 12:28 PM #326
ရောမကျောက်ရုပ်တွေပြီးသွားတော့ နောက်ရောက်တဲ့ နေရာက အီဂျစ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ ရှိရာဘက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မံမီတွေ မံမီထည့်သိုထားရာ ကျောက်ခေါင်းတွေကို အသားပေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံက တကယ့်မံမီအလောင်းလို့ ရေးထားပါတယ်။ ညကလည်း တဖြည်းဖြည်းနက်လာ အနားမှာ အဖော်ကလည်းမရှိတာမို့ ကျောချမ်းလာပြီး ခပ်မြန်မြန် ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သတ္တိကောင်းပုံများ . . . . .
အောက်ကပုံကတော့ လုဗ်ပြတိုက်ကြီးဆောက်ထားတဲ့နေရာက လုဗ်နန်းတော်ပေါ့။ အောက်မှာ တိုင်လုံးကြီးတွေတောင် ကျန်ပါသေးတယ်။
ပြန်အထွက်မှာတော့ မှောင်နေပြီ။ ပြတိုက်ကလည်း ပိတ်မှာမို့ နှင်တောင် နှင်နေပြီ. . .
000, abya, Ares, BainnowSAYAR, Botazan, fridayborn, k-pooh, LoveSuju, mgmgthan, MNO.BN, Mood, mrlynn, nyanmoe, peace777, sunny007, THARGYII, wasabi, zepeian
01-15-2013 02:51 PM #327
တော်တော်ကြာအောင်ပစ်ထားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို အချိန်ရတုန်း ဆက်လိုက်ဦးမယ်နော် . . .
အပြင်ရောက်တော့လည်း အပြင်က သူ့အလှနဲ့သူ။ ဘယ်သူမှတန်းပြီး မပြန်ကြပါဘူး အနီးအနားတဝိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့သူတွေက အများကြီးပါ။ ပဲရစ်မြို့က ညမှာလည်း လှနေပြန်တာပါပဲ။
လုဗ်ပြတိုက်အကြောင်းကတော့တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ ၁၂ ရာစုက Philippe Auguste ဘုရင်လက်ထက်မှာ လုဗ်နန်းတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခံတပ် တိုင်လုံးကြီးတွေတောင် ပြတိုက်အောက်မှ အခုထိ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ၁၆၈၂ လူဝီ ၁၄ လက်ထက်မှာ ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကို ပြောင်းရွှေ့နန်းစံပြီးနောက် ဒီလုဗ်နန်းတော်ကို တော်ဝင်ပစ္စည်းတွေ ပြသရာနေရာအဖြစ် သုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး အပြီးမှာတော့ ပြတိုက်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
အပြင်ဖက်က မြင်ကွင်းတွေကို ခံစားကြပါဦး
အပြင်မှာ လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး တည်းထိုရာ ဟိုတယ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ညဖက်မှာ မစည်ကားတဲ့နေရာဆို လူကို ရှင်းနေတာပဲ။ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ တစ်ညနေလုံး လမ်းလျှောက်ရတာကြောင့် အိပ်လို့ ကောင်းမှကောင်း . . . .
abya, Alintan, Botazan, fridayborn, Hollinaz, k-pooh, LoveSuju, MNO.BN, Mood, mrlynn, nyanmoe, sunny007, wasabi
03-03-2013 11:24 AM #328
ဒီတစ်ညမှာ အီဖယ်မျှော်စင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး ကင်မရာယူ စားစရာရှိတာမြန်မြန်စားပြီး ဟိုတယ်အောက်ကို ဆင်းလာတော့ အတန်းဖော်တွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။
သူတို့ကို ဘယ်သွားမလဲ မေးတော့ အီဖယ်မျှော်စင်တဲ့
ကိုင်း အဖော်ရပြီ ဆိုပြီး အတူတူတွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း သွားနေရာက ဖော်အပေါင်းတွေနဲ့မို့ စကားတပြောပြောနဲ့စိုစိုပြေပြေတော့ ရှိပါတယ်။
အီဖယ်မျှော်စင်ကို သွားရမယ့် ဘူတာရောက်တာနဲ့ အဲဒီဖက်ကို အသွားအလာတွေက ပိုပို များလာပါတယ် ။ ညဖက်တိမ်ပြာပြာနောက်ခံနဲ့ ရုတ်တရက် မျှော်စင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်အခါ အားလုံးက လှတယ်လို့ ထုတ်မပြောပဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး။
အလုအယက်ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတာပေါ့။ အဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ သူ့ကို ကိုယ်ကရိုက် ကိုယ့်ကိုသူက ရိုက်ပေးနဲ့ တော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးရိုက်လို့ ဝတော့မှ ဆက်ထွက်ကြတယ်။ အနားရောက်လာလေ ပို မြင်ရလေ ပို လှလေပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အပေါ်တက်ဖို့တန်းစီရမယ်တဲ့။ ၁၅ မိနစ်လောက် စီရမယ့်အရေးကို ကိုယ်တော်ချောတွေက မစီချင်ကြဘူး ညစာသွားစားကြမယ် ပြန်မှ တက်ကြည့်မယ်ပေါ့။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော် ဒီတစ်ညတော့ မျှော်စင်ပေါ်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာသိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာတတ်နိုင်မတုန်း။ သွားစားပေါ့။ လမ်းတစ်ဖက်ကူး တော့ နာမည်ကျော် စိန်းမြစ်ပေါ်က ဖြတ်ရပါတယ်။ မိသားစု၊ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပျားရည်ဆမ်းဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံထဲက River Cruse တစ်စီးစီးပေါ်မှာ ရှုခင်းတွေခံစားပြီး စားလို့ကောင်းပေါ့ . . .
အခုတော့ ပုံမှတ် ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုပဲ ရွေးချယ်သွားလိုက်တော့တယ်။
စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာကလည်း ညဖက်မှ လူကျတာမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ စောင့်ပေါ့။ စားပွဲထိုးကတော့ တက်ကြွတယ် ဒါပေမယ့် မီးဖိုချောင်ကမှ လုပ်မပေးနိုင်တော့ အဲဒီညစာက တစ်နာရီခွဲလောက် ကြာသွားပါတယ်။
ဒီညမျှော်စင်ပေါ်တက်ဖို့ ကတော့ တော်တော် မလွယ်တာပါ။ သူတို့ကပေးတက်ရင်တောင် ညလေအေးက တော်တော်လေး အေးတာမို့ အပေါ်မှာ မတွေးရဲစရာ။
တဖက် ပြန်ကြည့်ရတဲ မျှော်စင်ကြီးက ရေကန်နဲ့ ပနာရလှပါတယ်။
မျှော်စင်အောက် ပြန်ရောက်တဲ့အခါ တန်းမစီရတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့က ပထမထပ်အထိပဲတက်လို့ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ညဖက်ရှုခင်းက နေ့ခင်းလောက်မြင်ရမှာ မဟုတ်လို့ လက်လျှော့ပြီး ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
. . . . . ထမင်းတစ်ပွဲနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့ ပါရီညရှုခင်းပါပဲ . . . .
abya, Alintan, Botazan, DawBuMa, fridayborn, hellocatcat, k-pooh, Komaena, Mood, nnnaing, nyanmoe, PiNyat, sunny007, THARGYII
11-07-2013 06:09 PM #329
အချိန်မလောက်လို့ မရေးပဲ ပစ်ထားမိခဲ့တဲ့ ဒီခရီးလေးကို အချိန်ရသလောက်ဆက်ရေးလိ်ုက်ဦးမယ်နော် . . . .
ချမ်းချမ်းစီးစီး မနက်စောစောထပါဆိုရင် အိပ်ယာထပျင်းတဲ့အတွက်ရော ချမ်းချမ်းမှာစောင်ခြုံကွေးချင်တာရောကြောင်း ငြင်းတတ်တဲ့ ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ဖာသာဇွဲတင်းပြီး ဟိုတယ်က ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။
ညကမကြည့်လိုက်ရတဲ့ ပါရီရဲ့ အလှကို အပေါ်စီးက ကြည့်ဖို့အီဖယ်မျှော်စင်ရှိရာ ရထားစီး အရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်းသွားမယ်ပြောတော့ အတူသွားဖို့ မေးကြည့်တဲ့ အခါ သူက မစောင့်ရအောင် စောစောသွားမှာဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ပဲ တစ်ယောက်တည်း ထွက်ခဲ့တာပေါ့။
အနားရောက်နဲ့အခါ နည်းနည်းနောနောလူတန်းကြီး မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် တန်းမစီလည်း မရတာမို့ သူတို့နောက်က အသာဝင် တန်းစီရပါတယ်။ မနက်စောစောမှာ လေအေးက ဝင်မွှေပြန်တော့ တော်တော်ကို ချမ်းပါတယ်။ တဘက်ခြမ်းက ဓာတ်လှေခါးကလည်း ပြုပြင်နေဆဲ ပိတ်ထားတာမို့ တစ်ဖက်တည်းမှာ လူပိုများတာပေါ့လေ။ လမ်းလျှောက်တက်ရတဲ့ လှေခါးတစ်ခုရှိ ပေမယ့် ဟိုးအပေါ်အမြင့်အထိ တက်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားရင်း လမ်းတစ်ဝက်မှာ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးတာကြောင့် နှစ်နာရီကြာ တန်းပဲ စီလိုက်ပါတော့တယ်။
တန်းစီနေရင်း ဟိုဟိုဒီဒီငေးပေါ့။ နေထွက်လာပေမယ့် လေတိုက်တဲ့ အအေးကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်တာမို့ အနွေးထည် ထူထူကို ဆွဲဆွဲစိထားပါသေးတယ်။ အနားနီးလာတော့ လက်မှတ်ဝယ် လုံခြုံရေးကို ဖြတ်ပြီး အပေါ်တက်ခါနီးတော့ ကိုယ့်နောက်မှာ ဘယ်လောက်များ ကျန်သေးလည်း ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်ကို များနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ မတက်မဖြစ်ဆိုပြီး ဇွဲကောင်းကြသူတွေပေါ့ . . . .
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ ဓာတ်လှေခါး ရှိရာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်လှေခါးဆိုပေမယ့် ဓာတ်အားသက်သက်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘာနဲ့မောင်းလဲဆိုတော့ . . . . ..
academy, Botazan, HlaingKaLayThin, khit, KM Wai, LoveSuju, MATRIX, MNO.BN, nyanmoe, peace777, PiNyat, yokesoe, zoey
03-28-2015 03:09 AM #330
မျှော်စင်ဆောက်ကာစက အပေါ်ကို လူတွေဘယ်လို ရောက်အောက်ပို့မလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပေါ့။ တော်တော်များများက လမ်းလျှောက်တက်နိုင်မယ်ဆိုပေမယ့် ဓာတ်လှေခါးဆိုတာကတော့ လိုတာပါပဲ။ ပြင်သစ်ကုမÜဏီတွေကို ကန်ထရိုက်ပေးချင်ပေမယ့် သင့်တော်မယ့် ကုမÜဏီ မရှိတော့ ဥရောပက Otis Brothers & Company ကိုပဲနောက်ဆုံးမှာ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။ သူတို့က လူနှစ်ဆယ့်ငါးယောက်တင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်လှေကားကို ဒီဇိုင်းထုတ် တပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ မောင်းသူက အပြင်မှာပေါ့။ အဓိက ရေအားနဲ့ ပစöတင်မောင်းတံတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၆ မှာတော့ ကွန်ပြူ တာကွန်ထရိုး လျှပ်စစ် ဓာတ်လှေခါးတွေ ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရေအားကိုတော့ ကောင်တာဘဲလင့်စ် အတွက်ပဲ ဆက်ထားခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ ဓာတ်လှေခါးအိမ်တွေလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်ကို ရောက်လေ မြင်ကွင်းက လှလေပါပဲ။ အောက်မှာ တန်းစီနေသူတွေကလည်း များနေတုန်းပါ။
လေတွေကလည်း အေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တာမို့ မြင်ကွင်းကြည့်လိုက် အထဲဖက်ဝင်ပြီး နွေးအောင်နေလိုက် လုပ်ရပါတယ်။ ပဲရစ်မြို့ ကတော့ မျှော်စင်ပေါ်က ကြည့်ရင် အဝိုင်း တည်ဆောက်ထားပုံ မြင်ရပါတယ်။
aprilboy, badinf, Botazan, john009, koshwemung, maykyalzin, PiNyat, sunny007, THARGYII, THIHA